#Rounduptrial Archives - US Ilungelo Lokwazi
ezaposwa ngomhla Aprili 1, 2021 by UCarey Gillam
UKen Moll uxhobele idabi.
UMoll, igqwetha lokulimala elizinze eChicago, unamatyala amaninzi alindelwe kwi-Monsanto Co yangaphambili, bonke betyhola inkampani yokubulala ukhula i-Roundup ngenxa ye-non-Hodgkin lymphoma, kwaye ngoku ulungiselela amatyala amaninzi kulingo.
Inkampani yakwaMoll yenye yeendlela ezimbalwa ezingavumiyo ukunikezela ngemvumelwano ezenziwe ngumnini weMonsanto uBayer AG, endaweni yoko bathatha isigqibo sokuthatha umlo malunga nokhuseleko lweemveliso zokubulala iintsholongwane ezisekelwe eMonsanto zibuyela kwiinkundla zamatyala kwilizwe liphela.
Nangona iBayer iqinisekisile abatyali mali ukuba izisa ukuvalwa kwetyala elibiza kakhulu ngeRoundup Izivumelwano zokuhlala iyonke ngaphezulu kwe- $ 11 yezigidigidi, amatyala amatsha eRoundup isagcwaliswa, Ngokukodwa uninzi lubekiwe ukuba luvavanywe, kusetwa okokuqala ukuba kuqale ngoJulayi.
"Siya phambili," utshilo uMoll. Siyayenza le nto. ”
I-Moll ihlanganise uninzi lwengqina elifanayo elincede ukuphumelela izilingo ezintathu zeRoundup ezibanjiweyo ukuza kuthi ga ngoku. Kwaye uceba ukuxhomekeka kakhulu kumaxwebhu afanayo angaphakathi eMonsanto abonelela ngezityholo ezothusayo zokungaziphathi kakuhle kwezorhwebo ezakhokelela ukuba amajaji ajonge umonakalo omkhulu wezohlwayo kubamangali kolunye lolo vavanyo.
Ityala elimiselwe uJulayi 19
Ityala elinye elinomhla wokuvavanywa okuzayo libandakanya ibhinqa elineminyaka engama-70 eligama linguDonnetta Stephens waseYucaipa, eCalifornia owafunyaniswa ene-non-Hodgkin lymphoma (NHL) ngo-2017 kwaye uneengxaki ezininzi zempilo phakathi kwemijikelo emininzi ye-chemotherapy. UStephens usandula ukunikwa ithuba "lokukhetha", oko kuthetha ukuba ityala lakhe likhawulezisiwe, emva kwamagqwetha akhe wazise inkundla ukuba uStephen "ukwimo engapheliyo yentlungu," kwaye ulahlekelwe kukuqonda kunye nenkumbulo. Ityala limiselwe ukuxoxwa ngoJulayi 19 kwiNkundla ePhakamileyo yaseSan Bernardino eCalifornia.
Amanye amatyala aliqela sele enikezelwe kwimihla yokuvavanywa, okanye bafuna imihla yokuvavanywa, kubantu abadala kwaye ubuncinci umntwana omnye ophethwe yi-NHL abamangaleli batyholwa ukuba babangelwa kukuvezwa kweemveliso zeRoundup.
"Isimangalo asikapheli. Izakuba yintloko eqhubekekayo yeBayer neMonsanto, utshilo u-Andrew Kirkendall, inkampani yakhe ese-Texas enceda ukumela uStephens nabanye abathengi abafuna izilingo ezikhawulezayo.
U-Kirkendall uthe inkampani yakhe inamatyala aqhubela phambili kwityala elise California, Oregon, Missouri, Arkansas nase Massachusetts.
"Eli linamandla okuba ngamatyala alandelayo e-asbestos, utshilo, ebhekisa kumashumi eminyaka yamatyala aziswe kwiingxaki zempilo ezinxulumene ne-asbestos.
I-Bayer ithenge iMonsanto ngoJuni 2018 kanye njengoko ulingo lokuqala lomhlaza we-Roundup lwalusaqhubeka. Amajele kwimeko nganye eya kulingo lafumanisa ukuba i-Monsanto's herbicides ibangela umhlaza kwaye uMonsanto wachitha amashumi eminyaka efihla umngcipheko. Amabhaso eejaji afikelele ngaphaya kwe- $ 2 yezigidigidi, nangona izigwebo ziye zayalelwa ukuba zincitshiswe kwinkqubo yokubhena.
Emva kokuza phantsi kobunzima uxinzelelo oluvela kubatyali mali ukufumana indlela yokuthwala uxanduva, Kwaziswa uBayer ngoJuni ukuba ifikelele kwi-10 yezigidi zeedola zokuhlala ukusombulula uninzi lwe-100,000 Roundup amabango omhlaza e-United States. Ukusukela ngeloxesha ibisayina isivumelwano ngeefemu zamagqwetha kwilizwe liphela, kubandakanya neefemu ebezikhokele isimangalo ukusukela oko kwamiswa amatyala okuqala ngowama-2015. Inkampani iyazama nokufumana imvume yenkundla ngesicwangciso esahlukileyo seebhiliyoni ezimbini zeedola ukuzama gcina iimeko zomhlaza we-Roundup ezinokuthi zifayilishwe kwixesha elizayo zingayi eluvavanyweni.
I-Bayer khange ikwazi ukuhlala nazo zonke iifemu ezinabaxhasi bomhlaza we-Roundup, nangona kunjalo. Ngokwamagqwetha amangali amaninzi, iifem zabo zala ukwamkela indawo yokuhlala ngenxa yokuba amaxabiso ngokubanzi ayesuka kwi- $ 10,000 ukuya kwi-50,000, XNUMX kummangali-imbuyekezo yamagqwetha abonwa engonelanga.
"Sithe hayi kwaphela," utshilo uMoll.
Enye inkampani yezomthetho eqhubela phambili amatyala eSan Diego, eCarlifonia esekwe eSingleton Law Firm, enamatyala angama-400 Roundup asalinde eMissouri kwaye malunga nama-70 eCalifornia.
Ifemi ifuna ityala elikhawulezileyo ngoku UJoseph Mignone oneminyaka engama-76 ubudala, owafunyaniswa ene-NHL ngo-2019. UMignone wagqiba ichemotherapy ngaphezulu konyaka ophelileyo kodwa wanyamezela nemitha yokunyanga ithumba entanyeni, kwaye uyaqhubeka nokuhlupheka, ngokutsho kwenkundla efayilwayo efuna ukhetho lwetyala.
Kukho amabali amaninzi okubandezeleka ngaphakathi kweefayile zabamangali abasenethemba lokufumana usuku lwabo enkundleni ngokuchasene neMonsanto.
Iarhente ye-FBI ethathe umhlala-phantsi kunye nonjingalwazi wekholeji uJohn Schafer waqala ukusebenzisa i-Roundup ngo-1985 kwaye wasebenzisa i-herbicide amatyeli aliqela entwasahlobo, ukuwa kunye neenyanga zehlobo kude kube ngo-2017, ngokweerekhodi zenkundla. Khange anxibe iimpahla zokuzikhusela ade alumkiswe ngumhlobo ongumfama ngo-2015 ukuba anxibe iigloves. Wafunyaniswa ukuba une-NHL ngo-2018.
Iminyaka engamashumi amathandathu anesithathu ubudala uRandall Seidl wasebenzisa i-Roundup ngaphezulu kweminyaka engama-24, kubandakanya nokutshiza rhoqo imveliso ejikeleze iyadi yakhe eSan Antonio, eTexas ukusuka malunga no-2005 ukuya ku-2010 emva koko yajikeleza ipropathi eMantla Carolina de kwaba li-2014 xa wayefunyaniswa ene-NHL, ngokuka Iirekhodi zenkundla.
URobert Karman ufake iimveliso ze Roundup ukuqala ngo-1980, esebenzisa isitshizi esiphathwa ngesandla ukunyanga ukhula rhoqo ngeeveki ezingama-40 ngonyaka, ngokweerekhodi zenkundla. UKarman wafunyaniswa ukuba une-NHL ngoJulayi ka-2015 emva kokuba ugqirha wakhe wokhathalelo oluphambili efumene iqhuma esiswini sakhe. UKarman wasweleka ngoDisemba waloo nyaka eneminyaka engama-77.
Igqwetha labamangali uGerald Singleton uthe indlela ekuphela kwayo kaBayer yokubeka ityala leRoundup ngasemva kwayo kukubeka ilebhile ecacileyo yesilumkiso kwiimveliso zayo zokubulala ukhula, ukwazisa abasebenzisi ngomngcipheko womhlaza.
"Yiyo kuphela indlela eya kuthi le nto igqitywe yenziwe," utshilo. Kude kube lelo xesha, wathi, "asizukuyeka ukuthatha amatyala."
I-Monsanto Roundup Trial Tracker #Rounduptrial, B-iseli engeyiyo iHodgkin lymphoma, Bayer, umhlaza, inkundla, glyphosate, umthetho, magqwetha, zomthetho, ulwaphulo, IMonsanto, Bee, engeyiyo iHodgin lymphoma, inambuzane, Yisonge yonke, inzululwazi
Ukubandezeleka kweNdoda enye kubonakalise iimfihlo zikaMonsanto kwihlabathi
ezaposwa ngomhla Agasti 11, 2018 by UStacy Malkan
Iirekhodi zenkampani zityhile inyani etshabalalisayo ye-glyphosate-based herbicides 'link yomhlaza
Eli nqaku lapapashwa okokuqala kwi UMgcini.
Yayisisigqibo esiviwe kwihlabathi liphela. Ngokubetha okumangalisayo kwenye yezona mbewu zinkulu zembewu kunye neenkampani zamachiza, abagwebi eSan Francisco baxelele iMonsanto Kuya kufuneka uhlawule i-289 yezigidi zeedola kumonakalo kwindoda ebulawa ngumhlaza ethi ibangelwe kukuvezwa yimichiza yokubulala ukhula.
IMonsanto, eyaba yiyunithi yeBayer AG ngoJuni, ichithe amashumi eminyaka ikholisa abathengi, amafama, abezopolitiko kunye nabalawuli ukuba bangabuhoyi ubungqina obandayo obudibanisa i-glyphosate-based herbicides yomhlaza kunye nezinye iingxaki zempilo. Inkampani isebenzise uluhlu lweendlela-ezinye zithathwe kwincwadi yemidlalo efanayo esetyenziswa lishishini lecuba ekukhuseleni ukhuseleko lwecuba - ukucinezela nokusebenzisa uncwadi lwezenzululwazi, ukuhlukumeza iintatheli kunye nososayensi abangakhange baphathe ubuxoki benkampani, kunye nengalo kunye nokudibana nabalawuli. Ewe kunjalo, elinye lamagqwetha akhokelayo kaMonsanto kwityala laseSan Francisco UGeorge Lombardi, oqala ngokutsha ngokuziqhayisa ngomsebenzi wakhe wokukhusela icuba elikhulu.
Ngoku, kule meko inye, ngokubandezeleka kwendoda enye, amacebo afihlakeleyo kaMonsanto abekwe elubala ukuba ihlabathi libone. IMonsanto ayichazwanga ngamazwi oososayensi bayo, inyani yenyani ekhanyiswe zii-imeyile zenkampani, iingxelo zesicwangciso sangaphakathi kunye nolunye unxibelelwano.
Isigwebo sejaji asifumananga kuphela ukuba i-Roundup kaMonsanto kunye nemveliso ezinxulumene ne-glyphosate ibonise ingozi enkulu kubantu abayisebenzisayo, kodwa kukho ubungqina obucacileyo nobukholisayo bokuba amagosa kaMonsanto asebenze "ngobubi okanye ingcinezelo" ngokusilela ukulumkisa ngokufanelekileyo iingozi.
Ubungqina kunye nobungqina obuziswe etyaleni babonisa ukuba imiqondiso yesilumkiso ebonwe kuphando lwenzululwazi ibisemva kwexesha ukuya ekuqaleni kweminyaka yoo-1980 kwaye inyuke ngaphezulu kwamashumi eminyaka. Kodwa ngophando ngalunye olutsha olubonisa ukwenzakala, iMonsanto isebenze ukuba ingalumkisi abasebenzisi okanye iphinde iyile iimveliso zayo, kodwa iyile eyayo inzululwazi ukubonisa ukuba bakhuselekile. Inkampani yayihlala inyanzela inguqulelo yayo yesayensi kwindawo yoluntu umsebenzi obhaliweyo eyilelwe ukubonakala ngathi izimele kwaye ngenxa yoko inokuthenjwa ngakumbi. Kukwanikwe ubungqina kubaphengululi abonisa indlela le nkampani esebenze ngayo ngokusondeleyo kunye namagosa e-Arhente yoKhuselo lwezeNdalo ukukhuthaza umyalezo wokhuseleko kunye nokucinezela ubungqina bengozi.
"Ijaji yajonga lonke eli tyala lide kwaye yaqonda ngokucacileyo isayensi kwaye yaqonda nendima kaMonsanto ekuzameni ukufihla inyani," utshilo u-Aimee Wagstaff, elinye lamagqwetha aliqela ngeenxa zonke e-US abamele abanye abamangali benza amabango afanayo ku-Dewayne Johnson.
Eli tyala kunye nesigwebo ikakhulu zichaphazela utata oneminyaka engama-46 ubudala oye wavelisa uhlobo olubi nolubulalayo lwe-non-Hodgkin's lymphoma ngelixa wayesebenza njengomgcini wesikolo, ephalaza izixa ezikhulu zeMonsanto's Roundup kunye nezinye iimveliso zeherbicide zeglyphosate. Oogqirha bathe mhlawumbi akanakuba kudala ukuba aphile.
Iziphumo, nangona kunjalo, zibanzi kakhulu kwaye zinefuthe lehlabathi. Elinye ityala liza kuqhubeka ngo-Okthobha eSt Louis nase malunga ne-4,000 yabamangali Unamabango asalindelwe ziziphumo ezinokubangela uninzi lwamakhulu ezigidi, ukuba ayizibhiliyoni zeedola kumabhaso omonakalo. Bonke bathetha kungekuphela nje ukuba umhlaza wabo ubangelwe kukuvezwa kukutshabalalisa ukhula kwiMonsanto, kodwa kukuba iMonsanto kudala yazi malunga, kwaye yagquma, iingozi. Igqwetha labamangali elikhokela isimangalo bathi ukuza kuthi ga ngoku bazise kuphela iqhezu lobungqina obuqokelelwe kwiifayile zangaphakathi zeMonsanto kwaye baceba ukuveza okuninzi ngakumbi kwizilingo ezizayo.
IMonsanto igcina ukuba akukho nto iphosakeleyo, kwaye ubungqina buye babonakaliswa kakubi. Amagqwetha akhe athi banobuninzi bophando lwenzululwazi ngokuqinileyo kwicala labo, kwaye bazakubhena ngokuchasene nesigwebo, okuthetha ukuba kungayiminyaka ngaphambi kokuba uJohnson nosapho lwakhe babone nelinye ixesha lokuwongwa ngomonakalo. Ngeli xesha, unkosikazi wakhe, u-Araceli, usebenza imisebenzi emibini ukuxhasa esi sibini kunye noonyana babo ababini njengoko uJohnson elungiselela olunye ujikelezo lwe-chemotherapy.
Kodwa njengoko eli tyala kunye nezinye zitsala, inye into icacile: ayisiyiyo eyindoda enye kuphela ebulawa ngumhlaza. I-Glyphosate-based herbicides isetyenziswa kakhulu kwihlabathi jikelele (malunga nezigidi ezingama-826 kg unyaka) intsalela leyo iqhele ukufumaneka ekutyeni nonikezelo lwamanzi, nakwiisampulu zomhlaba nezomoya. Izazinzulu zase-US zide zirekhode Intsalela yokubulala ukhula kwimvula. Ukubonakaliswa kuyo yonke indawo, akunakuphepheka.
Ukuvuma umngcipheko kubalulekile kukhuseleko loluntu. Abalawuli, nangona kunjalo, boyisakele ukuthobela izilumkiso zezazinzulu ezizimeleyo ixesha elide, bade bakukhaba ngawakufumanisayo Umbutho wezeMpilo weHlabathi Oososayensi abaphambili abachaza i-glyphosate njenge-carcinogen yabantu.
Ngoku, kwixesha elidlulileyo, iimfihlo zenkampani ekudala zibanjiwe zivelisiwe.
Kwingxoxo yakhe yokuvala, igqwetha lommangali, u-Brent Wisner, uxelele ijaji ukuba lixesha lokuba uMonsanto abenoxanduva lokuphendula. Eli tyala, uthe, "lusuku lwenkampani".
Pesticides #Rounduptrial, Bayer AG, UCarey Gillam, UDeWayne Johnson, Environmental Protection Agency, EPA, UGeorge Lombardi, glyphosate, IMonsanto, Yisonge yonke